ဆောင်းပါး > Josepf Tkach ၏ > အခွင့်အလမ်းအများဆုံး Make
Wünschen Sie sich nicht, dass Sie Ihre Zeit ausdehnen könnten? Oder, noch besser, die Zeit zurück-drehen, um sie das zweite Mal besser zu nutzen? Aber wir alle wissen, dass die Zeit nicht so funktioniert. Sie tickt einfach weiter, egal wie wir sie nutzen oder vergeuden. Wir können vergeudete Zeit weder zurückkaufen, noch können wir falsch verwendete Zeit zurückgewinnen. Vielleicht ist das der Grund, warum der Apostel Paulus die Christen anwies: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus [a. Ü.: macht das Beste aus jeder Gelegenheit]; denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist (Eph. 5,15-17) ။
ဖက်မြို့ရှိခရစ်ယာန်များကိုအချိန်တိုင်းအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူတို့၏အချိန်ကိုဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီအသုံးပြုစေလိုသည်။ likeဖက်မြို့ကဲ့သို့ကြီးမားသောမြို့တစ်မြို့တွင်အာရုံပျံ့လွင့်စရာများစွာရှိသည်။ hesဖက်သည်အာရှရောမပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည့်အာတေမိဘုရားကျောင်း၏အိမ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ယနေ့ခေတ်မြို့ပြများကဲ့သို့ပင်ဤမြို့တွင်တိုးတက်များပြားလာသည်။ ဒါပေမဲ့ပေါလုကခရစ်ယာန်တွေကိုဒီဘုရားတရားမဲ့မြို့မှာခရစ်တော်ရဲ့လက်နဲ့လက်နက်ဖြစ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်လို့သတိပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၌စွမ်းရည်နှင့်အရင်းအမြစ်များရှိပြီးတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီရှိသည်။ ငါတို့သခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျွန်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကိုကျေနပ်စေမည့်အစားဘုရားသခင်အားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ရွေးနုတ်ရှင်ကိုဝတ်ပြုရန်အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုညည်းညူရန်၊ စော်ကားရန်၊ အဲဒီအစားသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကောင်းမှုများကိုကောင်းမှုဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြcrနာများကိုဘုရားသခင်အားအပ်နှံပြီးအစာအိမ်အနာကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုညွှန်ကြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ရက်များကိုအဖိုးထိုက်သော၊ အရေးကြီးသည့်အရာအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Epဖက်မြို့ရှိခရစ်ယာန်များထံစာရေးသည့်အခါပေါလုသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်မိနစ်တိုင်းကိုသူသတိပြုမိနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခရစ်တော်၌သူ၌နေထိုင်သောကြောင့်သူသည်ထောင်ချခြင်းကိုအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းများအများဆုံးရရှိရန်အတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူသည်ထောင်ချခံရခြင်းကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနှင့် အသုံးပြု၍ အသင်းတော်များသို့စာများရေးခဲ့ပြီးဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီမည်သို့နေထိုင်သင့်ကြောင်းခရစ်ယာန်များကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များသည်ပေါလုအချိန်ကခရစ်ယာန်များကြုံခဲ့ရသောအကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများတူညီကြသည်။ သို့သော်ဘုရားကျောင်းသည်အမှောင်ကမ္ဘာတွင်အလင်းတန်း၏တပ်စခန်းဖြစ်သည်ဟုသူကသတိပေးသည်။ ၀ ံဂေလိတရားသည် experienced ၀ ံဂေလိတရား၏အတွေ့အကြုံနှင့်အခြားသူများအားဝေငှသောရပ်ရွာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည်မြေကြီး၏ဆားဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းကိုတောင့်တသောကမ္ဘာကြီး၌မျှော်လင့်ချက်၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
လူငယ်တစ် ဦး သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်သူ၏လမ်းဖွင့ ်၍ နောက်ဆုံးတွင်အလွယ်တကူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်သောသမ္မတဟောင်းနေရာတွင်ခန့်အပ်ခံရသည်။ ရာထူးမယူမီရက်အနည်းငယ်တွင်ထိုလူငယ်သည်သမ္မတဟောင်းထံသို့ သွား၍ အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မလားဟုမေးမြန်းခဲ့သည်။
စကားနှစ်ခွန်းပြောခဲ့သည် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ! ထိုလူငယ်က“ မင်းသူတို့ကိုဘယ်လိုတွေ့မလဲ။ လူအိုက“ အတွေ့အကြုံရတယ်။ မင်းဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ လုလင်ကိုမေး အဘိုးအိုကဆုံးဖြတ်ချက်အမှား။
သခင်ယေရှုကိုကိုးစားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အမှားများအားလုံးသည်ပညာရှိစေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သည်ခရစ်တော်နှင့်ပိုတူလာပါစေ။ ဤလောက၌ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်သည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါစေ။